Waad Noqoni Kartaa Qoraa Haddii Aad Bilawdo Hadda | Tuke Somalism - Tukesomalism.com
2-daan Haddii Aad Fahanto Waxaad Fahantay Qiimaha Noloshaada oo Dhan!
Cabdijabaar Sh. Axmed, January 23, 2019
Caqliga iyo Maskaxda
Tallooyin Iyo Xikmado Ku Saabsan Nolosha
Maxamed Juxa, April 2, 2017
Sidee Ummadda Soomaaliyeed Xal Ku Heli karaan?||Tukesomalism.com
Aqoon GuudDhaqanka, Afka Hooyo, Taariikhda Soomaaliya & Dunidda
Cabdijabaar Sh. Axmed — December 10, 2016
Inaad qoraa noqoto ma ahan wax fudud. Dad badan ayaa jira oo ku fakiraayo inay noqdaan qoraa, balse waxay dareemayaan inay ku adagtahay inay wax qoraan ama ay qoraan buugg. Dabcan qoraanimadda ma ahan wax fudud, waa wax u baahan hawlo badan.
Qofka qoraaga ah waxaa loogu baahanyahay inuu yahay qof,
§ Wax curuni karo
§ Wax sharaxi karo
§ Wax tusaallayni kara
§ Wax si fudud u tusini kara aqristaha
§ Wax u sharaxi karo sidda ugu wanaagsan ee loo fahmi karo qoraalkiisa/qoraalkeeda
§ Waxwalbo dhex-dhexaad ka noqoni kara
§ Ku wanaagsan wadaniyadda
Qoraaga waa shaqsi muhiim u ah bulshada. Su’aasha isweydiinta mudan ayaa ah maxay tahay farqiga u dhaxeeyo qofka qoraaga ah iyo qofka saxafiga ah?
Qofka saxafiga ah waxaa ku filan inuu barto oo kali hababka loo diyaariyo sidda loo qoro wararka, inta kalena waa inuu ishorumariyo. Qofka saxafiga ah waa inuu bartaa sidda loo illaaliyo anshaxa iyo nidaamyada saxafinimadda.
Laakiin qofka doonaayo inuu noqda ama ah qoraa waxaa loogu baahanyahay waxyaabo badan oo aanan yarayn. Qofka jeclaysta inuu noqda qoraa waxaa marka horre wanaagsan inuu si fiican u fahansan yahay shaqadaan qoraanimada ku saabsan. Waa inuu noqdaa shaqsi leh mawhibad.
Aniga Cabduljabaar ahaan ma ihi qoraa mudo ku jiray hawshaan qoraanimada ah, wali waxaan aaminsanahay inaan u baahanahay inaan wax badan kasii barto qoraanimada.
Waqtigii aan aas-aasay Tuke Somalism waxaan la kulmay caqabado badan oo ku saabsan siddii aan u qori lahaa aqqoonteyda, aragtiyada kala duwan iyo wali waxyaabaha muhiimka u ah bulshada si aan wax u tusini karo bulshada.
Waxaa dhacda marmarka qaar waxyaabaha aad rabto inaad wax ka qorto waxay ku jiraan maskaxdaada balse hadana waxaa kugu adag inaad si toos ah u qori karin waxyaabaha ku jira maskaxdaada.
Waxaan arkay shaqsiyaad jaamacado kasoo qalin jabiyay hadana qaabka ay wax u qorayaan aad la yaabaysid sawabtoo ah aqqoonta wey haayaan balse ma hayaan qaabkii ay usoo gudbini lahayeen aqqoontooda. Sawabtoo ah wey ku adagtahay inay noqdaan qoraa, waxayna u baahanyihiin inay safar dheer u galaan siddii ay wax u curuni lahayeen.
Waxaan soo qaadanayaa qodobo yar oo muhiim kuu ah haddii aad doonayso inaad noqoto qoraa. Qodobadaan waxaan fahmay intii aan ahaa qoraa.
B) In badan wax aqri. Qofka wax aqriska badan wuxuu macluumaad badan ka dhexlaa qoraagga. Haddii aad doonayso inaad noqoto qoraa, waxaa wanaagsan inaad in badan wax aqriso adiga. Maxaa yeelay markii maskaxdaada ay ku jiraan macluumaad badan, waxaa kuu suurta geli karo inaad wax badan wax qori karto oo aad wax curuni karto.
Isku day inaad aqriso buuggaag badan oo kala duwan, iskuday inaad aqriso maqaallo badan oo kala duwan oo ay qoreen qorayaal lagu kalsoonyahay qaababka ay wax u qoraan. Qaabka aan qoraa ku noqday waxay ahayd, waxaan ahaa shaqsi jecel wax aqriska.
Wakhtiyadii aan jaamacada dhigani jiray aad ayaan u jeclaa inaan aqriyo buugaagta jaamacada maxaa yeelay waxaan aaminsanaa marwalbo oo aan aqristo buugaagta jaamacada inaan helaayo cilmi iyo macluumaad cusub.
“Haddii aad doonayso inaad noqoto qoraa marka horre adiga wax aqri si adigana qoraalkaada loo aqrisani karo” -Cabduljabaar Sheekh Axmed
Hadalkaas aniga nafsadeyda ayaan ku dhiiro gelini jiray, si dadka ugu helaan qaabka aan wax u qoro, maantana wuxuu illaahay xukmay inaan u sameysto meel aan ku faafiyo cilmiga.
T) In badan wax qor. Qoraanimada waa xirfad iyo aqqoon la barto sidda loo barto cilmiga kale sidda tiktoornimada, injineernimada, siyaasinimada, iwm. Si aad u noqoto qoraa lagu kalsoonyahay in badan wax qor.
Maalin walbo dhaqan iyo dabeecad ka dhigo inaad wax qorto. Sameyso blog ama la xariir website-yo, ama sameyso website adiga qaas kuu ah. Marwalbo aad joogtayso wax qoristaada waxaa kor u kaca xirfadaada qoraanimada.
Sidoo kale anaga Tuke Somalism ayaad nala soo xariiri kartaa si aan kuu tabbabarno. Tabbabarka kadibna waxaa dadka u dirnaa waddooyin ay maraan si ay kama dambeystii ugu mid noqon karaan bahda qorayaasha iyo indheergaradka bulshada ee Tuke Somalism.
J) Marwalbo qor fikradaha. Waxaa loo baahan yahay inaad marwalbo qorto fikraha. Buugg yar oo ogaysiis ah u sameyso kuna qor waxyaabaha aad baratay oo ku saabsan qoraanimada. Waxaana wanaagsan inaad isticmaasho fikraha aad baratay. Si fiican isha ula raac markaad wax aqrinayso, isweydii sidda wanaagsan uu qoraaga wax u qoray. Waa muhiim inaad wax badan ka barato fikraha ku saabsan caalamadaha sidda joogsi. , calaamatul su’aal ?, calaamatul cajiib!,
X) Wakhti ku haboon wax qor. Wax ha qorin adigoo mashquulsan. Iska xer dhammaan emailada, Facebooga, iyo waxwalbo aad isleedahay way ku mashquulini doonaan. Maxaa yeelay marka aad wax qorayso waxaad u baahan tahay qol mugdi ah oo jawigiisa degenyahay. Waxbo haku qorin meel booq badan. Sawabtoo ah waxaad u baahantahay inaad wax ku qorto maskax degen.
Kh) qorshey, kadibna qor. Marwalbo oo aad wax qorayso waxaa wanaagsan inaad qorsheyso. Waxaa wanaagsan inaad qorto qoraal yar oo qodobo muhiim ah. Waxaad marwalbo ka tixraacaysaa qoraalkaas qodobada aad u baahantahay inaad wax ka qorto.
Qoraal walbo oo la qoraayo waa inuu lahadaa u jeedo. Si aad u jeedadaasi u gaarto waxaa wanaagsan inaad sameysato qodobo muhiim kuu ah oo aad doonayso inaad si wanaagsan ugu sharaxdo maqaalkaada.
Qoraanimada cid ku dhalatay ma jirto, qofwalbo wuu bartaa. Marwalbo marka aad aqrinayso buugg ama maqaal isku day inaad wax badan ka ogaato qoraaladaas. Sirta ka nuqul gareey oo fahan sidda ugu wanaagsan oo aad kaga barani karto qoraagaas.
Waa muhiim inaad isticmaasho erayo xikmadeysan oo soo jiidasho leh. Marka aad wax qorto markale dib u fiiri qoraalkaada, iskana hubi qallalaadka ku jira. Isticmaal jumlado yar yar balse ay ku jiraan erayo waxtar leh. Waxa ugu muhiimsan qoraalkaada waa qeybaha bilaawga iyo dhammaadka balse waxaa ugu sii muhiimsan qeybta bilawga.
Tags: Waad Noqoni Kartaa Qoraa Haddii Aad Bilawdo Hadda |Tukesomalism.com
Next post Waa Maxay Niyad-samida ay Lahaani Karto Shirkadaada? ”Goodwill”
Previous post Istaraatijiyada Suuqa 'Market Strategy'
Mahad osman abdulle
August 26, 2019 at 4:17 pm	— Reply
Waxaan rabaa inaan noqdo qoraa
September 29, 2019 at 4:36 pm	— Reply
Asc waa ku salamay Abdi jabaar sheikh Ahmad
Qaabka wax loo qoro
Maxa yeelay waa qoralku
Dadka inta badan waxeey umaleeyan
Qoralku inuu fudud yahay
December 5, 2019 at 2:59 am	— Reply
And Gmail com.